यस्तो रह्यो सिंगापुरमा उत्तर कोरिया र अमेरिकी नेताबीचको भेटवार्ता | Rajmarga
यस्तो रह्यो सिंगापुरमा उत्तर कोरिया र अमेरिकी नेताबीचको भेटवार्ता
सिंगापुर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीचको पहिलो शिखर वार्ता सकिएको छ । ऐतिहासिक वार्तापछि दुवै नेताले पहिलो वार्ता फलदायी भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले किमसँगको सम्बन्ध आगामी दिनमा पनि सौहार्दपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गर्दै पुराना मतभेदलाई भुलेर आफूहरू अगाडि बढिसकेको उल्लेख गरे। भेटवार्तापछि किमले ट्रम्पलाई अंग्रेजीमा भने–नाइस टु मिट यु, मिस्टर प्रेजिडेन्ट ।
सिंगापुरको सैन्टोसा द्वीपस्थित कैपेला होटलमा भएको यो भेटवार्ता झन्डै ३८ मिनेट चलेको थियो। व्हाइट हाउसले बैठकको समयको जानकारी दिएको हो ।
आपसी भेटवार्तापछि जब किम र ट्रम्प बाहिर निस्केर हिँड्न लागे तब पत्रकारहरुले हिड्दाहिड्दै प्रश्न पनि गरे, एक जना पत्रकारले किम जोंग उनलाई सोधे–अध्यक्ष के तपाई परमाणु निसस्त्रीकरण गर्नुहुनेछ ?
अर्का एक जना पत्रकारले पनि प्रश्न गरे–मिस्टर किम के तपाई आफ्नो परमाणु हतियार नष्ट गर्नुहुनेछ ?
तर उत्तर कोरियाली नेताले यी सबै प्रश्नलाई नजरअन्दाज गरे । यद्यपि किमले संगै हिडिरहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकारहरुसँग भने कि सबै कुरा उत्तम तरिकाले चलिरहेको छ।
शिर्ष नेताहरुको बैठकपछि दुवै नेताका साथमा आएका बरिष्ठ सल्लाहकार र सहयोगीहरुबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ। अमेरिकाको तर्फबाट बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पका साथ विदेशमन्त्री पोम्पियो, व्हाइट हाउसका चिफ अफ स्टाफ जोन कैली र सुरक्षा सल्लहकार जोन बाल्टन देखिएका छन् ।
अर्कातिर उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उनका साथमा सबैभन्दा निकट मानिने किम योंग चोल सहभागी छन् । यसका साथै विदेशमन्त्री री योंग हो र पूर्व विदेशमन्त्री री सु योंग पनि सहभागी छन्।
किम र ट्रम्पबीच भएको फेस टु फेस अर्थात आमनेसामने भेटवार्ता होटलको लाइब्रेरीमा भएको हो । यसअघि दुवै नेताले एउटा सानो पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
यसक्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले भने–म निकै नै राम्रो महशुस गरिहेको छु । हामीबीच शानदार कुराकानी हुनेवाला छ र मलाई लाग्दछ कि यो कुराकानी जबरजस्त ढंगले सफल हुनेछ । यो मेरा लागि निकै नै सम्मानजनक छ र मलाई यसका कुनै शंका छैन कि हामीबीच गहिरो सम्बन्ध स्थापित हुनेछ ।
यही किम जोंग उनले भने–यहाँसम्म पुग्न सहज थिएन, हाम्रो इतिहास…र हाम्रा पूर्वाग्रह यस दिशामा अघि बढ्नका लागि अवरोध बनिरहेको थियो । तर हामी ती सबैलाई पार गरेर अहिले यहाँ उपस्थित छौ ।
किम जोंग उनसँग भेट गर्नुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा ट्वीट गरे, जसमा यो बैठकलाई लिएर स्वयम ट्रम्पमा विभिन्न आशंका रहेको संकेत मिल्दथ्यो । ट्रम्पले लेखका छन् कि स्टाफका सदस्यहरु प्रतिनिधिहरुबीच सबै कुरा राम्रो रहयो तर यो निकै अर्थपूर्ण छ । निकै नै चाँडै यो थाहा हुनेछ कि यो भेटवार्तामा कुनै असल सम्झौता हुन सक्यो कि सकेन ।
किमलाई लिएर सिंगापुरमा उत्साह
आशंकाहरु आफ्नै ठाउँमा छ, तर आशा पनि कम छैन । संसारमा धेरै मानिस चाहन्छन् कि १८ महिनाअघिसम्म एकअर्कामाथि आक्रमणको धम्की दिइरहेका देश, मिलेर शान्ति स्थापित गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । त्यसैले जब किम जोंग उन सिंगापुरमा घुमिरहेका थिए तब त्यहाँ उनीप्रति मानिसहरुको जबरजस्त उत्साह देखिएको थियो ।
किमले पनि सिंगापुरबासीलाई निराश पारेनन् र मुस्कुराउँदै हात हल्लाएर उनीहरुलाई अभिवादन गरे
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यो भेटलाई शानित स्थापना गर्ने एउटा ‘अर्को मौका’ मानिरहेका छन् । संसारभन्दा अलग्गैजस्तो रहेको उत्तर कोरियाका लागि यो संसारसँग जोडिने स्वर्णिम अवसर हो ।
Previous post: मुग्लिङ सडकमा सात ठाउँमा पहिरो, यातायात अवरुद्ध, यात्रुलाई सास्ती
Next post: महिलाले टपलेस भएर नुहाउन पाउने कि नपाउने विषयमा जनमतसंग्रह, यस्तो आयो नतिजा
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको थुनछेक बहस आज पनि जारी रहने
अनुदानको रकम दुरुपयोग हुन नदिन किसानको घरमै पुग्दै गण्डकी सरकार